Ny rakikira vaovao an'i Muse dia mifangaro mivantana amin'ny taona 80 | Famoronana an-tserasera
Muse dia vondrona mozika rock fanta-daza izay dia nihodina tamin'ny taona 80 tany amin'ny rakikirany vaovao an'ny mozika. Noho io antony io dia nitondra mpanakanto iray niavaka tamin'ny endriny Retro izy ary azo antoka fa fantatrao amin'ny andiam-pahitalavitra malaza iray izany.
Album vaovao an'i Muse antsoina hoe théorie simulation izany ary te ho ankehitriny raha ny famolavolana no resahina. Farafaharatsiny, amin'ny fiverenana amin'ny fironana sasany izay nalaza tamin'ny taona 80 tany ho any rehefa nanjaka ny The Goonies, Polaroid ary marika hafa mifandraika amin'ity folo taona ity.
Nanakarama ny tarika rock ho an'ilay mpamorona ny sary famantarana Stranger Things ihany, hiaraka amin'ireo 80 ireo, izay hitantsika koa taratra roa andro lasa izay amin'ny marika ankehitriny toa an'i Apple, Microsoft ary maro hafa.
Tsy hita intsony ny kanto fonosana Theory Simulation mivantana amin'ny loko mena, amin'ny sakan'ny feony, ary manga, izay mifangaro tanteraka amin'ny tonony samihafa. Fonony izay mitondra an'io fahatsiarovana io ihany koa i Blade Runner, na dia manintona kokoa aza ny fanontana vaovao, dia somary miparitaka kely raha ampitahaintsika amin'ny asa masina natokana ho an'ny siansa foronina.
Tsy misy tsy fahampiana izany neon mikasika toetra mampiavaka azy, manipy fahatsiarovana ny fialam-boly mahafinaritra Out Run isika, ary ny endri-tsoratra mitovy amin'ilay endritsoratra toy ny GTA Vice City miloko mavokely. Fahazoana an'io folo taona io, sarotra ho an'ny maro, fa mbola manentana ny fotoana mamorona amin'ny sokajy famoronana rehetra ankehitriny.
Es Kyle Lambert ilay mpamorona izay niandraikitra an'io asa io, toa ny nataony tamin'ny Stranger Things, ilay andian-tsarimihetsika TV izay namerina ny votoatin'ny an-taonany maro ny sarimihetsika toa ny The Goonies, Back to the Future ary maro hafa izay mijanona ao amin'ny fitadidian'ny maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Nifangaro tamin'ny taona 80 i Muse tamin'ny 'rakotra' vaovao an'ny rakikirany vaovao